News - Myanmar Young Entrepreneurs Association
MYEA & ASEAN
Member Form (Ordinary Member)
Member Form (Associate Member)
Apply Membership Offline
AGM အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုလွှာ
မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MYEA) ၏ စတုတ္တအကြိမ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲ (AGM) ကို ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမပေါ်ရှိ Novotel Hotel Yangon Max တွင် ၄.၂.၂၀၁၇ (စနေနေ့) ၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ AGMသို့ အချိန်မအားမလပ်သည့်ကြားမှ တက်ရောက် ချီမြှင့်ပေးပြီး၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ တက်ရောက်လာသော စွန့်ဦးတီထွင်လူငယ်လုပ်ငန်းရှင် (entrepreneurs) များ အတွက် အားပေးစကားပြောကြားကာ လူငယ်များ၏ အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့်အတူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းများမှ ဧည့်သည်တော်များ၊ AGM ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Sponsors များအဖြစ် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြသော Platinum Sponsor – ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ […]
Admin ML Activities, Events, News
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်အသင်းသားစုံညီညစာစားပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပမည်။
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်အသင်းသားစုံညီညစာစားပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်မှ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားဖိတ်ကြားထားသောဂုဏ်သရေရှိဧည့်သည်တော်များလည်း တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ၃၁.၁.၂၀၁၇ ညနေ ၅နာရီ မတိုင်မီ MYEA အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသူများသာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကြိုတင်စာရင်းပေးစနစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကန့်သတ်လူဦးရေထက် ကျော်လွန်လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိပါသောကြောင့် အမြန်ဆုံးစာရင်းပေးသွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ နေ့ရက်။ ။ ၄.၂.၂၀၁၇ (စနေနေ့) အချိန်။ ။ ညနေ ၆:၀၀ – ၉:၀၀ နာရီ နေရာ။ ။ Yangon Ballroom, Novotel Yangon Max Hotel အဝတ်အစား။ ။ Smart Casual စာရင်းပေးသွင်းရက် ယနေ့မှစပြီး ၂.၂.၂၀၁၇ ညနေ ၅:ဝ၀ အထိ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သော်လည်း ယင်းအချိန်မတိုင်မီ […]
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပါတ်လည် အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးကျင်းပမည်။
ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပါတ်လည် အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးကြီးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ရန် အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် အသင်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ၊ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ အသင်းဝင်များ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ဆုံတွေ့နိုင်ရန်နှင့် အသင်းသို့ဝင်ရောက်လိုသူများအားလည်း လက်ကမ်းကြိုဆိုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များ ၁။ အသင်း၏ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းစဉ်များအား တင်ပြခြင်း၊ ၂။ ဘဏ္ဏာငွေရယူသုံးစွဲမှုအခြေအနေကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ၃။ အသင်း၏ အနာဂတ်လမ်းပြမြေပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအားဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်း၊ ၄။ အသင်း၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်သစ်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ၅။ “A New Era for Entrepreneurship” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အောင်မြင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများမှ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲ။ တက်ရောက်မည့်သူများ ၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ၂။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဖိတ်ကြားထားသော […]
MYEA welcome new team for 2017-2019
MYEA Election for (2017-2019) term was successfully finished on December 18, 2016. MYEA would like to congratulate and welcome new Management Committee, Central Executive Committee Members and Executive Committee Members. Elected members are as follows. ၁။ ဦးထွန်းထွန်းနိုင် (ဥက္ကဌ) ၂။ ဦးဇော်နိုင်သိန်း (ဒုတိယ ဥက္ကဌ) ၃။ Dr. ဒေါ်စုစုလှိုင် (ဒုတိယ ဥက္ကဌ) ၄။ ဒေါ်မေသက်ခိုင် (ဒုတိယ ဥက္ကဌ) ၅။ Dr. ဦးအောင်သူရ (ဒုတိယ […]
myeadmin Events, News
The Very First Myanmar Entrepreneurship Summit 2016 setamilestone for better future
MYEA sincerely thanks the support from State Counsellor, H.E. Daw Aung San Suu Kyi, honorable guests and leaders. Most importantly, youths, the entrepreneurs and guests from all over Myanmar for making the very first Myanmar Entrepreneurship Summitahuge success and settingamilestone for better future. MYEA always asateam have achieved plenty […]
myeadmin Activities, Events, News
Success Stories 04, July/2016, Daw Su Mon Naing
Monthly Success Stories presented by MYEA, Myanmar Young Entrepreneurs Association, Yangon, Myanmar. Daw Su Mon Naing Deputy Managing Director Toyota Mingalar Motor
Admin ML Activities, News, Success Stories
Copyright © MYEA - Myanmar Young Entrepreneurs Association.
Another Creation of Media Lane